MIYUU SUURAGAL YAHAY IN LA BEERO KA DIB MARKII DABOCASE UU U GAAR AH, WAXA UU KU BEERANAYO HALKA UU KU KORAY, SANADKAN, HADDII QAJAARKA, BASASHA, YAANYADA KU DHALAN DOONAA, MAXAY YIHIIN DALAGYADA SI AY DHINAC DHINAC UGU SEEXDAAN SARIIR ISKU MID AH? - BEER CAGAARAN
Maxaa la abuuri karaa ka dib ama dabocase, oo waxay ku kori doontaa goobta dalagyada kale?
Helitaanka beeritaanka dabocase, sida dalagga kale, waxaa lagama maarmaan ah in la go'aamiyo ma aha oo kaliya doorashada ee site for beeritaanka, laakiin sidoo kale leh iswaafajinta dhirta. Iyadoo la tixgelinayo shuruucda wareegga dalagga iyo xaafadaha cagaaran ee sariiraha ayaa muhiim u ah koritaanka dalagyada xididka, qiyaasidda cufnaanta ee warshadaha, iyo dayacidda qaabka tayada ee ciidda.
In this article waxaan kuu sheegi doonaa waxa aad dhali kartaa ka dib markii radishes ee isla sanadka soo socda iyo xilli soo socda, waxaad dhali kartaa qajaarka ama yaanyada ka dib markii, sida dhirta dareemayaa haddii basasha koraa albaabka xiga iyo waxa ka fiican si ay u beeraan abuur qudaar ah?
Waa maxay sababta ay udhexayso dhaqamada kala duwan?
Warshad kasta waxay u baahan tahay xaddi ka duwan nafaqooyinka carrada.. Waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo isbedelka miraha dalagga - isbedelka dalagyada marka la beeray si loo helo waxsoosaar sarreysa.
Iyadoo beerashada muddada dheer ee dhirta hal meel, cudurada gaarka ah, cayayaanka, haramaha ayaa kori kara, ciidda waa la tirtiri karaa. Waxaa lagama maarmaan ah in si habeysan loo hirgaliyo dalagyada dalagga si ay saameyn ugu yeeshaan isbeddelka kaliya.
Isdhexgalka cagaaran ee sariiraha waxaa lagu bartaa sayniska gaarka ah - allelopathy. Warshad kasta waxay sii deyneysaa bey'adaha kala duwan ee si wanaagsan ama si xun u saameeya dalagyada beeraha ee soo socda. Bannaanka u khibrad leh waa in la raaco dhirta isku dhafan ee dhirta.
Qodobbada soo socdaa waxay ku xiran yihiin iswaafajinta dhaqamada:
keydka goobta badbaadinta;
Ka-reebitaan la'aanta ciidda;
kordhinta tayada miraha;
la'aanta bacarin dheeraad ah;
hagaajinta dhadhanka dalagyada koray;
qashinka ugu yar ee daaweynta dhirta ka soo cayayaanka.
Cawska dalagga iyo beeritaanka isku dhafan waxaa lagu xakameynayaa qaababka si gaar ah loo soocay ee isbeddelka dhirta ee sirqoollada, iyo sidoo kale waqtiyo ku meel gaar ah ee ururinta dalagyada.
Ka dib markaad khudrado ka dhigi kartid radishes?
Si aad u go'aamiso dhirta - kuwa horay u soo saartay, ka dib markaad si karti leh u abuuri karto dabocase, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida khudaarta ay uula socoto nidaamka deegaanka oo horey loogu abaabulay sariiro beerta iyadoo ay sabab u tahay koritaanka dalagga kale. Root waxay u baahan tahay iftiin, qoyaan wanaagsan (laga bilaabo 60 ilaa 70%), qaab-dhismeedka ciidda bacrin ah, nafaqooyin.
Talin ku beerto radishes on sariiraha ka dib markii la goostay baradho horemarka ciidda ay ku jiri doonto diirad yar oo ah nitrogen, taas oo aan u oggolaan doonin botnel in ay horumariso aad u badan, halka xididada xoog leh koraan. Laakiin waa in maskaxda lagu hayaa in uu jiro potassium ka yar carrada, waana lagama maarmaan in la kordhiyo khudaarta quruxda leh leh midab dhalaalaya. Dib u soo celi nafaqadan adigoo ku beeraya miro ama waxyaabo dheeri ah.
Horay u fiican ee loogu talagalay radishes waa bocorka, qajaarka, zucchini, cagaarka. Caawinaada wanaagsani waa codsiga Bacriminta dabiiciga ah ee korriinka khudaarta cagaaran. Waa la ogol yahay in la gooyo xididada iyo goosashada ka dib goosashada iyo digirta.
Ha u oggolaan beeritaanka dabocase ka dib markaad dharka, kaabajka, dabocase ama dabocase sababtoo ah halista guud ee cayayaanka iyo cudurada leh dalagyadaas. Waa mid aan loo baahnayn in la beero xididdada iyo digirta goosashada ka dib.
Marka xigta waxa uu dhirta ku dareemayo fiicnaan goobta?
Root wuxuu si wanaagsan u koraa xiga uuska. Deriska noocan oo kale ah wuxuu saameyn wanaagsan ku leeyahay dhadhanka iyo cabbirka dabocase, wuxuu ilaaliyaa beerto ka soo duulaya kaabajka iyo gooryaanka. Dalagyada rootiga waxay ku talinayaan in la beero 14 maalmood ka hor qiyaasta digirta.
Si aad u hesho dalag ballaaran, waxaa lagama maarmaan ah in la beero watercress, nasturtium sariir la wadaago. Dabocase waa mid waxtar leh si aad u dhigto midka xiga ee qajaarka, dhoobo, strawberries, canab, strawberries, maadaama ay leedahay saameyn togan ku saabsan dalagyadaas. Dalagyada isku dhafan, xididdada ayaa si fiican u dhigma leh dhir, karootada.
Ma sameyn kartid radishes oo ku xiga beerta hilibka dabiiciga, basasha, fennel, xabagta, geed husob.
Maxaa la abuuri karaa kadib dabocase xagaaga sanadka soo socda?
Dalagyada xididada fitamiin waxaa laga beeray guga inta lagu jiro xilliga xagaaga (iyadoo ku xiran isbeddelka noocyada kala duwan), ka hor diyaarinta dhulka laga bilaabo dayrta. Bishii Juun, laguma talinayo in lagu beero sababtoo ah muddada dheer ee iftiinka qoraxda, sida dhirta ay u tagaan fallaadhaha oo aan ku siin dalagga.
Radishes si buuxda u bislaadaan laga bilaabo 20 ilaa 40 maalmood, ururinta khudaarta, bannaanka u bilaabaan si ay u diyaariyaan site for dalagyada kale. Haddii dhirta isku dhafan la sameeyay, ka dibna goobta ayaa si fudud uga baxeysa koritaanka dalagyada.
Ka dib goosashada, dalagyada xididka aan la beeray sariiraha isku mid ah:
Dabeysha, xilliga kuleelka iyo xilliga xiga, haddii dalagyada aan lagu darin qajaarka, digirta baadiyaha, squash, aaggan waxaa lagu beeray karaa:
Waxaad ku beeri kartaa qaraha, laakiin kaliya haddii aagga loo qoondeeyey goobta si aad u koraan dalagyada ballaaran. Eggplants si fiican u koraan ka dib markii dabocase.
Sida xilli xagaaga soo socda, waxaa lagama maarmaan ah in la qorsheeyo beeritaanka iyo tixgelinta waxa la koray sariiraha ka dib goosashada dabocase. Tusaale ahaan, haddii baradhada la beeray ka dib markii la goostay dalagga hore ee xididdada, ka dibna waxaa habboon in la beero qajaarka, bocorka, toonta, zucchini, digirta xilliga soo socda. Khudaarta (Khudradda) khudaarta waa in aan la beerin dhowr sano.
Miyuu suurtogal ah in lagu beero khudradda isla meesha?
Khubarada ma talinayaan in ay beeraan khudaarta isku mid ah hal meel.. Radish ma dhicin ciidda, laakiin ma aha lagama maarmaan in dib-u-beeraan noocyada isku mid ah dalagyada hal meel ah, si looga saaro jabinta dhirta by cayayaanka iyo cudurada. In ka badan 3 sano oo nasasho ah. Win-win - cagaarka beerto ka dib markii dabocase:
basasha on baalasha;
noocyo saladh ah.
Waxaad bedeli kartaa beeritaanka dalagyada dalagyada dalagyada beeraha, zucchini, yaanyada, basasha, peas, eggplant.
Cawaaqibka u dhigma
Ku xadgudub xeerarka u dhigma dhirta sariiraha, waxaad la kulmi kartaa dhibaatooyin badan. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Dalagyada daryeelka caafimaadka aan habooneyn, marka ballaaran ee sariiraha ma dhaafi doono hal mitir, haddii maqnaanshaha kala duwan ee beeritaanka by qaangaarka, height, xaaladaha iftiiminta.
Dhimista dhulka haddii ay dhacdo xilliyo wareegsan oo dalag ah, marka laga reebo sideratov beerto si ay u kobciso ciidda meelaha xorta ah.
Helitaanka khudaarta cagaaran ama khudaarta aan caadiga ahayn, beeritaanka isku xigta ee isku midka ah geedaha isku midka ah ama la xiriira.
Marka laga beerto dalagyada caleemaha sariiraha, meesha dalagga dabocase, kaabajka, malayga, daboolka ayaa la goostay, boodada jilicsan waxay bilaabaan inay cunaan godadka caleemaha, cagaarka oo u engegay, khudradda aan helin miisaanka lagama maarmaanka ah, joojiya koritaanka. Caleemaha kiiskan waa in lagu daaweeyaa bacda qiiqa tubaakada, ku dar 2 koob oo ah walaxda isku dar ah 50 g oo saabuun iyo 10 litir oo biyo ah.
Marka laga beerto radishes meel u dhow dhirta kale ee cruciferous, infekshanka xayrta ee budada ah ayaa laga heli karaa meesha dhirta deform iyo gaabin koritaanka. Beerto waxaa lagu daaweeyaa fungicides ama bordeaux isku dar ah.
Dhirta cawska cawska ee aagga waxay u horseedi kartaa guuldaradii keelka.marka kobcinta la abuuro dalagyada xididada leh sababtoo ah xaaladaha carrada acidic. Xididdada dhirta isla mar qudha waxay soo noqdaan bunni iyo kallana. Ka tirtir cudurada by waraabinta caanaha lime.
Iyadoo la tixgelinayo xeerarka isdhaafka dalagga markaad beertid, waxaad ka hortagi kartaa dhibaatooyinka la xiriira beerista dabocase, fududeeysa daryeelka beeraha, hannaanka ciidda tayada leh ee sariiro beerta, ka heli dalag badan oo khudaarta cagaaran.